XAASAASI: Matthijs De Ligt Oo Lagu Arkay Mid Ka Mid Ah Magaalooyinkii Kooxooda Lala Xidhiidhinayay. - Gool24.Net
XAASAASI: Matthijs De Ligt Oo Lagu Arkay Mid Ka Mid Ah Magaalooyinkii Kooxooda Lala Xidhiidhinayay.
Kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs De Ligt ayay isku haystaan kooxaha Yurub ugu waa wayni waxaana lagu arkay mid ka mid ah magaalooyinkii kooxahooda lala xidhiidhinayay.
Kooxaha Yurub ugu waa wayn oo ay ka mid yihiin Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Man City iyo PSG ayaa dhamaantood lala xidhiidhinayay saxiixa Matthijs De Ligt.
Laakiin Matthijs De Ligt ayaa lagu sawiray isaga oo jooga magaalada Barcelona oo ah goobtii inta ugu badan lala xidhiidhinayay in uu kooxda Barcelona ugu biirayo.
Laakiin waxaa la ogaaday sababta dhabta ah ee uu De Ligt u tagay magaalada Barcelona taas oo aan si toos ah xidhiidh ula lahayn wararkii suuqa ee Barcelona la xidhiidhinayay balse ay maamulka Barca uga faa’iidaysan karaan.
Kadib markii ay Ajax ku guulaysatay koobka horyaalka Holland waxay u safreen magaalada Barcelona, waana sababta dhabta ah ee De Ligt loogu arkay magaaladan si uu ciyaartoyda kooxdiisa Ajax ugula dabaal dego koobka ay ku soo guulaysteen.
Kadib markii ay Ajax ku soo dabaal degtay magaalada Amsterdam waxay u safreen magaalada Barcelona si ay dabaal degooda halkaas uga sii wataan laakiin in De Ligt halkan lagu arkay ayaa su’aalo sii kicisay.
De Ligt ayaa lagu sawiray garoonka diyaaradaha magaalada Barcelona ee El Prat Airport markaas oo uu ciyaartoyda kooxdiisa Ajax la soo gaadhay magaalada Barcelona.
Maamulka Barcelona ayaa hadda heli kara fursad ay kula kulmi karaan Matthijs De Ligt maadaama oo uu ku soo booqday goobtooda waxayna sii xoojin karaan booskii ay saxiixa xidigan kaga jireen.
Frenkie De Jong oo ay Barcelona bishii January ku iibsatay 75 milyan yuro ayaa isna ka mid ah ciyaartoyda Ajax ee magaalada Barcelona dabaal dega u tagay isaga oo heli kara fursad uu kula kulmi karo kooxdiisa cusub ee Barca.
Si kastaba ha ahaatee, imaatinka Matthijs De Ligt ee magalaada Barcelona waxay sii hurisay wararkii sida xoogan Barcelona ula xidhiidhinayay iyada oo la filayo in ay maamulka Barca fursadan ka faa’iidaysan karaan.